पोखरेली पर्यटनका कर्मीमौरी::Nepali News Portal from Nepal
पोखरा ,२५ फागुन – ‘सुरुगर्ने बेलामा त्यस्तो धेरै सोचेर राखेको नाम त होइन । सुन्दा मीठो र सजिलो होस् भन्ने थियो, बिजी बी क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्टका सञ्चालक ज्याक तामाङले नामबारे भेद खुलाए, ‘त्यति धेरै महत्व पनि दिएको हैन ।’
बिजी बी को नेपाली अर्थ हुन्छ व्यस्त मौरी । हो, झण्डै तीन दशकअघि उनै ज्याक तामाङले सुरु गरेको ‘बिजी बी’ साँच्चिकै व्यस्त हुन्छ । र, ग्राहक आएपछि ज्याक झन व्यस्त !
बिजी बी भन्नेबित्तिकै ‘बच्चाहरुका लागि खुलेको रेस्टुरेन्ट’ जस्तो ठान्दिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता थियो रे उनलाई । तर, उनले धेरैदिन यो चिन्ता लिनु परेन । व्यवसाय सुरुभएपछि मौरीजस्तै व्यस्त रह्यो बिजी बी रेस्टुरेण्ट । ‘बिजी बी’ नामजस्तै व्यस्त रह्यो, व्यस्त मौरी नै भयो,’ यसो भनिरहँदा उनी मन्द मुस्कुराए ।
बिजी बी रेस्टुरेन्टको कथा पनि छुट्टै छ । ३ दशकअघि पोखराको लेकसाइडमा ‘बिमबिम रेस्टुरेन्ट’को नामबाट स्थापनामा आएको रेष्टुरेण्ट कालान्तरमा ‘बिजी बी’मा बदलियो । खोटाङको दुर्गम गाउँदेखि काम खोज्ने उपक्रममा पहिला काठमाण्डौ र त्यसपछि पोखरा झरेका ज्याकको पसिनाको कमाई हो ‘बिजी बी’ क्याफे । सामान्य कामदारदेखि रेष्टुरेण्ट मालिक बन्ने उपक्रममा उनको संघर्षको कथा पनि उस्तै छ । खोटाङबाट काठमाण्डौ झर्दा १७÷१८ वर्षको थिएँ होला’, तामाङले विगत सुनाए,‘ ४ वर्ष जति ठमेलमा काम गरेँ ।’ हिप्पीको जमाना थियो त्यो । नेपालीलाई पाहुना नै नमान्ने, कोठा नै नदिने बेला । ज्याक ठमेलकै होटलमा काम गर्थे । होटल मजदूरी छाडेर उनी युरोप हानिए । ४ वर्षको युरोप बसाईपछि ज्याक नेपाल र सँगै पोखरा आए । पहिल्यै चिनेका नेपाली र विदेशी साथी छँदैथिए । भेटघाटको बेला ‘सानोतिनो व्यवसाय गरौँ न’ भन्ने हुन्थ्यो । त्यो बेला पोखरामा स्तरीय रेष्टुराँ धेरै थिएनन् । ‘गोरा साथीहरुसँग यसो रेष्टुराँ छि¥यो, खाना नै स्तरीय छैन, पिज्जा मगायो,पिज्जाजस्तै नहुने !’, उनले ती दिन सम्झे,‘ ‘ल है तैले एउटा स्तरीय विदेशी रेष्टुरेण्ट खोलिस् भने राम्रो हुन्छ भनेर साथीहरुले सल्लाह दिए, ‘लौ, ट्राई गरौँ न त भनेर सुरु गरेको, अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।’
रेष्टुरेण्ट खुल्यो । तर, त्यहीबेला इराकमा युद्ध चक्र्यो । रेष्टुरेण्टमा ग्राहक नै छैनन् । बिहान रेष्टुरेण्ट खोल्यो,साँझसम्म माखो नछिर्ने, व्यवसाय सखाप ! उनी थक्थकाए । किन नेपाल आएछु, किन रेष्टुरेण्ट खोलेछु भन्ने पनि भयो रे ! ५÷६ महिनासम्म व्यापार पूरै ठप्प । पछि बिस्तारै बढ्यो । दशवर्षे द्वन्द्वकालमा पनि मन्दी त आएको होे तर उनले हिम्मत हारेनन् । धेरै रेष्टुरेण्ट त बन्दै भए । ज्याक सम्झिन्छन्, ‘तर, हामीले गेस्टहरुलाईसेवा दिन बाँकी राखेनौँ । त्यो समयमा नभएका अफवाह पनि फैलाइन्थ्यो । सबै अप्ठ्यारा पार गर्दै हामी यहाँसम्म आयौँ ।’
नेपाली सेलिब्रेटीदेखि ठूला राजनीतिक नेताहरु पनि पोखरा आउँदा बिजी बीमा नआइ फर्किन्नन् । यसैलाई व्यवसायको ठुलो सफला मानेका छन् ,ज्याकले । हरेक व्यवसायीहरुको चाहना हुन्छ । अरुको भन्दा आफ्नो व्यवसाय राम्रो होस् । धेरै भन्दा धेरै ग्राहक आफ्नोमै आउन् । तर, ज्याकलाई भने कहिलेकाहिँ यहाँभन्दा धेरै मान्छे नआउन् भन्ने पनि लाग्छ रे ! रेष्टुरेण्टको सुरुआती समयमा विदेशी पर्यटकहरुमै निर्भर रहे पनि अहिले भने टिएनजरदेखि बार जानेहरुको पहिलो गन्तब्य ‘बिजी बी क्याफे भएको उनको ठम्याई छ ।
‘लेकसाइड चौबीसै घन्टा खोल्नुपर्छ’ एक पक्ष भन्छ । अर्को ९ बजे नै बन्द गर्ने पक्षमा छ । ९ नबज्दै प्रहरी लाठी बोकेर बन्द गराउन पुगेको खबर पनि सुनिन्छ, यदाकदा । केही महिनाअघि त मुद्धै परेको थियो । पर्यटकीय नगरीमा बसेर ९ बजे नै रेस्टुराँ बन्द गर्नु पर्यटकद्रोही काम भएको उनले जिकिर गरे । मैले सुनेको बार, रेष्टुरेण्टले हल्ला बढी गरे रे !’ बार, रेष्टुरेण्ट भनेको नै हल्ला गर्ने ठाउँ हो त । कानेखुसी गर्दै साउती मार्न कोही रेष्टुरेण्टमा जान्छ ? आफ्नो समस्या त आफैं समाधान गर्नुप¥यो नि ।’
पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउछौं भन्नेले नै २४ घन्टा खोल्नुको साँचो अर्थ नबुझेकोमा उनको गुनासो छ । २४ घन्टा खोल्नुको मतलब बार रेष्टुरेण्ट मात्र खोल्ने होइन । कफी सप, बेकरी पनि पर्छन्, २४ घन्टा भित्र । ‘ट्वान्टीफोर आवर भन्ने बित्तिकै बार, रेस्टुरेन्ट मात्रै खोल्ने ?’, उनले प्रश्न गरे,‘ कसले बिहान ४ बजे उठेर रक्सी खान्छ ?’
ज्याक मेहनतले सफ बने । उनलाई भाग्यले पनि साथ दियो । त्यसो भए सफलताको सूत्र के त ? ‘सबैभन्दा पहिला त मेहेनत गर्नुप¥यो । लगनशील हुनुप¥यो । मुख्यकुरा त के व्यवसाय हो त्यो विषयमा ज्ञान हुुनुप¥यो । असम्भव भन्ने केही छैन’, उनले भने,‘व्यवसायमा सफल हुन आफूले कति लगानी गरेर कति प्रोफिट गर्ने हो पहिले नै योजना हुनुपर्छ । एकजनाले हजार रुपैयाँमा कोठा दियो भन्दैमा आफूले पनि उसको दाँजोमा लागेर ५ सयमा दिएर त हुँदैन ।’ आफ्नो बजार आफै बनाउने, देखासिकीभन्दा पनि योजना अनुसार काम गर्न उनले सुझाए । तीन दशकअघि सुरु भएको बिजी बी क्याफेले अहिले बिजी बी रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।